अक्टोबर शतवार्षिकी कार्यक्रमको समापन
काठमाडौँ । अक्टोबर क्रान्तिको सतवार्षिकी कार्यक्रमको समापन गरिएको छ । गर्त वर्ष २०७३ कार्तिक २२ गते तदनुसार नोभेम्बर ७, २०१६ का दिन अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले १०० वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा नेकपा (मसाल) समेत सामेल रहेको क्रान्तिकारी पार्टी तथा सङ्गठनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय (आइकोर) को आह्वानमा विश्वभरि शतवार्षिकी कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको थियो । अक्टोबर क्रान्तिको सतवार्षिकी कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको ठिक एक वर्षपछि ७ अक्टोबर २०१७ अर्थात् २०७४ कार्तिक २१ गतेका दिन आइकोर कै आयोजनामा रूसको लेनिन ग्राद अर्थात् पिटर्सवर्गमा भव्य समारोह गरी सतवार्षिकी कार्यक्रमको समापन गरिएको छ ।
उक्त समारोह अघि आइकोरमा आबद्ध विश्वका विभिन्न देशहरूमा रहेका क्रान्तिकारी पार्टी तथा सङ्गठनहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै रूस पुगेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले विशाल प्रदर्शन गरेका थिए । उक्त प्रदर्शन एवं समारोहमा सहभागी बन्न नेपालबाट नेकपा(मसाल) आबद्ध ३८ जना नेता तथा कार्यकर्ताहरू रूस पुगेका थिए । (यो समाचार तयार पार्दासम्म रूसको पिटर्स वर्गमा अक्टोबर क्रान्तिको सतवार्षिकी समापन कार्यक्रम भर्खर मात्र शुरु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यसर्थ यससम्बन्धी विस्तृत समचार हामीले आगामी अङ्कमा दिनेछौँ ।)
अक्टोबर क्रान्तिको सतवार्षिकी कार्यक्रम एक वर्षभरि विविध कार्यक्रमका साथ मनाउने आइकोरको निर्णय अनुसार नेपालमा पनि नेकपा(मसाल)ले एक वर्षदेखि देशव्यापी रूपमा “नयाँ पिढीबाट हजारौँ हजार क्रान्तिकारीहरू भर्ना गरौँ” मूल नाराका साथ विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । अक्टोबर क्रान्तिको सय वर्ष पूरा भएकै दिन ७ अक्टोबर २०१७ अर्थात् २०७४ कार्तिक २१ गतेका दिन नेकपा (मसाल)ले पनि एक समारोहको आयोजना गरी सतवार्षिकी कार्यक्रमको समापन गरेको छ ।
राजधानी काठमाडौँकै एक स्थानमा एक विशेष समारोहको आयोजना गरी नेकपा(मसाल) ले सो सतवार्षिकी कार्यक्रमको समापन गरेको हो । नेकपा (मसाल) केन्द्रीय कार्यालयद्वारा आयोजित सो अक्टोबर क्रान्तिको सतवार्षिकी समापन समारोहको प्रमुख अतिथि ने.क.पा.(मसाल) का पिविएम कामरेड सहज रहनुभएको थियो । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि कमरेड सहजले पूँजीवाद रहुन्जेल संसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलन चलिरहने र रूसी समाजवादी अक्टोबर क्रान्तिको महत्व झनै बढेर जाने बताउनुभयो । “साम्राज्यवादीहरूले विश्वव्यापी रूपमा हौवा फैलाइरहेका छन्–संसारबाट समाजवाद पतन भयो, कम्युनिस्ट आन्दोलन सकियो भनेर ।” कामरेड सहजले भन्नुभयो–“तर यथार्थ कुरा त्यस्तो पटक्कै होइन । पूँजीवाद रहुन्जेल, संसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलन चलिरहन्छ । रूसी समाजवादी अक्टोबर क्रान्तिको महत्व अहिले झनै बढेर गएको छ ।” सम्बोधनको क्रममा कमरेड सहजले साम्राज्यवादीहरूले भनेझै विश्व समाजवादी व्यवस्थाको भविष्य नसकिएको प्रष्ट पार्नुभयो । “समाजमा शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचार रहुन्जेल कम्युनिस्ट आन्दोलन कसैले सकियो भन्दैमा सकिने छैन ।” उहाँले भन्नुभयो । “अहिले विश्वव्यापी रूसमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर जस्तो देखिए पनि यो अस्थायी कुरा हो । समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य उज्वल नै छ । समाजवाद अवश्यमभावी छ– त्यो एक दिन क्रान्तिले सय वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा आइकोरको निर्णय अनुसार नेकपा (मसाल)ले पनि नेपालमा एक वर्षसम्म सतवार्षिकी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको स्मरण गराउँदै कमरेड सहजले रूसको पिटर्सवर्गमा हुने समारोहमा सहभागी बन्न नेपालबाट नेकपा (मसाल) आबद्ध ३८ जना नेता कार्यकर्ताहरू रूस पुगेको जानकारी गराउनुभयो । “आजका दिन रूसको लेनिनग्रादमा विश्वभरिबाट हजारौँ क्रान्तिकारीहरू जम्मा भएर विशाल प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यो समारोहमा सहभागी हुन नेकपा (मसाल) आबद्ध ३८ नेता कार्यकर्ता रूस पुगेका छन् ।” यहाँले भन्नुभयो –“आज नेपाल मात्र होइन विश्वभरिका श्रमजीवी वर्गहरूले आ–आफ्नो देशमा अक्टोबर क्रान्तिको स्मरण गर्दै यस्तै कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।”
सम्बोधनको क्रममा प्रमुख अतिथि कमरेड सहजले एमाले र माओवादी–केन्द्रको गठबन्धनले देशमा समाजवाद ल्याउन नसक्ने बताउनुभयो । “अहिले नेपालमा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच गठबन्धन भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रुवावासी चलिरहेको छ । लौ नेपालमा समाजवाद आउने भयो, कम्युनिस्ट शासन आउने भयो भनेर चिच्चाइरहेका छन् काङ्ग्रेसी नेताहरू । प्रधानमन्त्री देउवाले त अस्ति एक ठषउँमा भने पनि –कम्युनिस्टहरूको व्यवस्था समाजवाद आयो भने रुन पनि पाइँदैन ।” उहाँले भन्नुभयो– “हो कम्युनिस्टहरूको वास्तविक व्यवस्था आयो भने जनताले रुनु पर्दैैन । काङ्ग्रेसी नेताहरूको अहिले रुवावासी चलेको त आफूहरूको जनता रुवाउन पाइँदैनकी भनेर हो । तर सत्य कुरा यही हो कि एमाले–माओवादी केन्द्रले ल्याउन खोजेको समाजवाद वास्तविक कम्युनिस्टले ल्याउने समाजवाद हुनेछैन । किनकि उनीहरूले कम्युनिस्टको नीति सिद्धान्त धेरै पहिल्यै छोडिसकेका छन् ।”
समारोहलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सचिव हिमलाल पुरी, अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ (अन्टुक) का अध्यक्ष नारायण सापकोटा, अखिल नेपाल बुद्धिजीवीसङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रा.डा. श्रीधर गौतम र अखिल नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष मनु वि.क.ले समेत सम्बोधन गर्नुभएको थियो । समारोहको अध्यक्षता नेकपा (मसाल) काठमाडौँका प्रवक्ता झविन्द्र बेलबासेले गर्नुभएको थियो । नेकपा (मसाल) भक्तपुरका प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीको स्वागत मन्तव्य रहेको सो समारोहको सञ्चालन अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका अध्यक्ष्ँ निमबहादुर बुढाथोकीले गर्नुभएको थियो । समारोहमा अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष अधिवक्ता पदम रोका, अखिल (छैठौँ) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष्ँ रेशम कंडेल, रक्तिम सांस्कृतिक अभियानकी केन्द्रीय सचिवालय सदस्य निलिमा पुन, अखिल नेपाल प्रगतिशील लेखक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य समिर सिंह र अखिल नेपाल युवक सङ्घका केन्द्रीय सचिव रमेश पौडेलको समेत आतिथ्यता रहेको थियो ।
बुटवलमा पनि अक्टोबर क्रान्तिको स्मरण
बुटवल । रूपन्देहीको बुटवलमा पनि विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरूले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गरी अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी मनाएका छन् । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले गत वर्षदेखि सञ्चालित अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रमको बुटवलको ट्राफिक चोकमा सभाको आयोजना गरी समापन गरेको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष बद्रे आलमले प्रमुख अतिथिको आसनबाट सम्बोधन गर्नु भएको थियो । सो अवसरमा राजमोकै केन्द्रीय सदस्य सोम कार्कीले पनि सम्बोधन गर्नु भएको थियो । कृष्णवम मल्लको अध्यक्षता र दीपक पौडेलको सञ्चालनमा अगाडि बढेको उक्त कार्यक्रममा जातीय समता समाजका सल्लाहकार राजेश विश्वकर्मा, अखिल नेपाल युवक सङ्घका कोषाध्यक्ष बाबुराम आचार्य, गोपाल बञ्जाडे लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । सभामा रक्तिम परवारका कलाकारहरूले जनवादी गीत तथा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै, नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र माक्र्सवादी विचार मञ्चले बुटवलको रातोघरमा छुट्टै कार्यक्रम गरी अक्टोबर क्रान्ति मनाएका छन् । सोही कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तेज प्रसाद कँडेलले अक्टोबर क्रान्तिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले अक्टोबर क्रान्तिको मर्मलाई आत्मसात गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । वामपन्थी नेता युवराज पन्थीले अक्टोबर क्रान्तिबाट पाठ सिकेर किसान मजदुरहरूलाई कम्युुनिस्ट पार्टीमा सङ्गठित गरेर समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको लक्ष्यतिर लाग्नु पर्ने बताउनु भएको थियो । कार्यक्रममा नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) का केन्द्रीय सदस्य पे्रम सुवेदी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका पूर्व सल्लाहकार पुरुषोत्तम कँडेल, नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज शरद ओली, जातीय समता समाजका सल्लाहकार राजेश विश्वकर्मा, लेखक तथा साहित्यकार दिल साहनी, तुलसीराम शर्मा, अधिवक्ता तथा नागरिक अगुवा पदम बहादुर कार्की लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । युवराज पन्थीको अध्यक्षता र विन बहादुर कुँवरको सञ्चालनमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
यता, पुष्पलाल विचार मञ्च र माक्र्सवादी अध्ययन प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा बुटवलको पुष्पलाल भवनमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरिएको छ । सोही कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव विष्णु पौडेलले सम्बोधन गर्नु भएको थियो । प्रगतिशील लेखक सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष देवेन्द्र घिमिरेको अध्यक्षता र ऋषि आजादको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा पूर्व सांसद नेत्र प्रसाद पन्थी, पत्रकार वालकृष्ण चापागाई, बाबुराम आचार्य, वामदेव क्षेत्री, मुकुन्द पोखरेल लगायतले पनि मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
देश–विदेशमा पनि कार्यक्रम
अक्टोबर क्रान्तिको समापन कार्यक्रम देश–विदेशमा सम्पन्न भएका छन् । रोल्पामा राष्ट्रिय जनमोर्चाको आयोजनामा अक्टोबर क्रान्तिको समापन गरिएको छ । रोहित सिंहको अध्यक्षता तथा शिवजङ्ग राउतको सञ्चालनमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा राजमो जिल्ला अध्यक्ष मेघनाथ विष्ट, राजमोका अन्य नेताहरू बुद्धि बहादुर रावत, रविसरा पुन, निम कुमार मल्ल, रमेश पुन लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । हेमराज राउतले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको सो कार्यक्रममा रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका कलाकारहरूले प्रस्तुति दिएका थिए ।
एवं प्रकारले चुनावी कार्यक्रममा बीचमा देशभरि राष्ट्रिय जनमोर्चाले अक्टोबर क्रान्तिको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको राजमो केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।भारतमा केन्द्रीय स्तर र क्षेत्रीय स्तरमा विविध कार्यक्रममा साथ अक्टोबर क्रान्तिको समापन गरिएको छ भने विश्वभरिका नेपाली एकता समाजले सो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजले जनाएको छ ।